Top 10 Back to My Mac Alternatives
Back to My Mac bụ ọhụrụ iCloud desktọọpụ ohere atụmatụ na-agba ọsọ Mac OS X odum (10.7.5) ma ọ bụ ọhụrụ, na-ekwe ime ohere. Ọ na-eji Wide-Area bonjour ka ntukwasi-obi-achọpụta ọrụ n'elu internet na-akpaghị aka hazi ad hoc, na-ina, ebe-ebe ezoro ezo njikọ n'etiti kọmputa na iji IPsec.
Part 1. Mee Up Back to My Mac
Part 2. Olee otú Jiri Back to My ndabere
Part 3. Back to My Mac Alternatives maka Windows
Part 4. Back to My Mac Alternatives maka iOS
Melite Back to My Mac, i nwere ike mkpa esonụ ihe:
Abụọ ma ọ bụ karịa Mac kọmputa site na iji otu iCloud akaụntụ OS X odum (version 10.7.5) ma ọ bụ ọhụrụ.
Otu Airport isi ojii v7.6.1 ma ọ bụ mgbe e mesịrị (Airport Oke, Airport Express, ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ Time Capsule) ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ internet rawụta akwado UPnP ma ọ bụ Nat-PMP na ọhụrụ femụwe.
Airport Utility (version 6.3) ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
A 300Kbps ma ọ bụ ngwa ngwa bi-directional internet njikọ dị n'etiti kọmputa maka ákwà ngebichi òkè.
A firewall na-enye ohere ime njikọ. Ụfọdụ firewalls igbochi ụfọdụ Back to My Mac njikọ.
A Mac OS Extended (Journaled) Ị USB mbanye a chọrọ iji Airport Oke ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ Time Capsule iji nweta mpụga mbanye. Mgbe ọ na-eji na Back to My Back, na draịvụ ike ga-apụta dị ka isi ojii n'okpuru Shared na Finder sidebar.
Bido na Melite
Na-amalite, ị chọrọ ka elu Back to My Mac na onye ọ bụla na kọmputa na ị na-achọ.
Gaa System Mmasị si Apple NchNhr na pịa iCloud.
Banye na iCloud na gị Apple ID.
Họrọ Back to My Mac.
Soro na e kpere melite ntụziaka gosiri esote azụ My Back.
Melite Security nhọrọ.
Mee Up Security Nhọrọ.
Back to My Back eji IPSec na SSL encrypt ala nkwurịta okwu n'etiti Macs na Back to My Mac, na digitally gbaara Kerberos maka njirimara nkwenye. Na Kerberos, ị na-adịghị na-abanye nzere oge ọ bụla jikọọ. Mwube nche nhọrọ na-achọ ndị na-esonụ.
1. Mee Strong Okwuntughe
Melite ike okwuntughe maka ọrụ akaụntụ na-okwuntughe nchebe.
2.-achọ n'Aka a Paswọdu
Tụgharịa na nhọrọ na-achọ a paswọọdụ maka niile kọmputa gị Mac netwọk na-amalite ha, teta ha si ụra ma ọ bụ wepuÚ a screensaver. Nzọụkwụ na-eso bụ:
Gaa System Mmasị na pịa Security & Nzuzo.
Họrọ-achọ n'Aka paswọọdụ ozugbo mgbe ụra ma ọ bụ nchekwa ihuenyo amalite.
3. mkpọchi ihuenyo Iji aka
Mee mkpọchi ihuenyo nhọrọ maka niile kọmputa na Back to My Mac netwọk. Nke a na-enye ohere ihuenyo igbachi aka tupu ọgwụgwụ nke a nnọkọ na ohere bụ nanị kwe omume Ozugbo nchekwa ihuenyo-aga azụ on.
Iji tọọ mkpọchi ihuenyo na-egosi na desktọọpụ;
Gaa Key Access na Ngwa / Utilities.
Họrọ Mmasị na pịa General taabụ.
Họrọ Gosi Eriri Ngakọ Igodo ọnọdụ na menu mmanya. A gbachiekwa icon-egosi na menu mmanya n'ụlọ n'elu nke gị na desktọọpụ.
Pịa gbachiekwa na akara ngosi na-ahọrọ mkpọchi ihuenyo igbachi aka.
4. Gbanyụọ Automatic Banye
Gbanyụọ akpaka nbanye niile Macs bịanyere aka na iCloud iji gbochie mfe ohere.
Họrọ System Mmasị si menu na pịa Ọrụ & Groups.
Pịa mkpọchi akara ngosi na ala nke window.
Tinye nchịkwa aha na paswọọdụ, na pịa Unlock.
N'elu mkpọchi icon, pịa Banye Nhọrọ na ịtọ Automatic nbanye ka anya.
Pịa mkpọchi icon ọzọ ma na-emechi window.
N'ime obodo Njikọ
Mgbe mwube ọ bụla Mac ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ elu isi ojii, ndị ya n'ime obodo njikọ.
Họrọ Mmasị si Finder menu na pịa sidebar taabụ.
Họrọ Back to My Mac na nnwekọrịta ngalaba.
Mepee a Finder window, anya maka nnwekọrịta ngalaba na sidebar na pịa akọrọ mgbe ịtụkwasị pointer n'ihi okwu nnwekọrịta.
Pịa Jikọọ Dị ka mgbe na-ahọpụta ndị dịpụrụ kọmputa ma ọ bụ isi ojii na-enweta. Pịa All ịhụ ihe niile dị Mac kọmputa na isi ụgbọ.
Back to My Mac ike-agbanyụrịrị n'oge ọ bụla. Nke a mere site na iwepu Mac ma ọ bụ Airport isi ojii si Back to My Mac netwọk.
Part 2. Olee otú Jiri Back to My Mac
Back to My Mac-enye gị ohere iji nweta a Mac si ike mbanye na gbanwee faịlụ site ọ bụla internet ejikọrọ Mac-agba ọsọ OS X odum (10.7.5) ma ọ bụ ọhụrụ. A na ihuenyo nkekọrịta mma na ya nwekwara ike-eji na-emeghe ma dezie faịlụ na ọzọ Mac kọmputa, nweta ígwè ọrụ ndị ọzọ na ị netwọk na bulite mkpa faịlụ ka iCloud.com.
Ka malitere, tinye iCloud ozi na onye ọ bụla nke Mac na kọmputa ruo na ike jikọọ azụ My Mac, mgbe ahụ-atụgharị na Back to My Mac atụmatụ. Ị ga-kpaliri maka edinam ke Ịkekọrịta Mmasị ebi ndụ ọ bụrụ na ị chọrọ iji rụọ ọrụ wuru na-OS X ọrụ ndị dị ka File Ịkekọrịta, Ihuenyo Ịkekọrịta na Tetanụ maka Network Access.
Mgbe niile kọmputa e jikọọ, ị nwere ike ịkọrọ faịlụ-eso ndị a:
Ẹkedori Finder, họrọ kọmputa ị chọrọ jikọọ si nnwekọrịta Atiya na Akụkụ mmanya.
Jikọọ ọbịa, aha, njirimara ma ọ bụ na-eji ihe Apple ID mgbe kpaliri.
Ozugbo ejikọrọ, a Finder window meghere egosi niile dị faịlụ gị ime na kọmputa.
Dọrọ na dobe ọ bụla faịlụ na ị chọrọ site n'ime ime na kọmputa ruo na onye ị na-eji. File transfer ga-amalite.
Ịchịkwa a Mac Remotely
Ị nwere ike ịkekọrịta ihuenyo, òké na keyboard on Back to My Mac ejikọrọ ígwè ọrụ. Iji mee nke a, na-eso ndị a:
Ẹkedori Finder na-ahọrọ Mac ị ga-achọ ịchịkwa.
Pịa Share ihuenyo n'elu nri. Nke a ga-egosi gị a n'ezie na oge onyinyo nke ime igwe.
Access faịlụ site na a Time Capsule
A Time Capsule bụ Nchikota superfast Wi-Fi isi ojii na nnukwu ike mbanye. Ha na-ihe ka mma ngwaọrụ maka Time Machine Backups. Ịnweta faịlụ site na Back m Mac-enye ohere ihe dị mfe ohere ka ọtụtụ dị mkpa faịlụ echekwara na backups. Aka Back to My Mac na Time Capsule, eso ndị a:
Ẹkedori Airport Utility na pịa Airport.
Pịa Dezie iji bugote Nhọrọ NchNhr.
Pịa (+) na ala nke Base Station taabụ, n'okpuru ọmụma nile banyere Back m Mac.
Banye na iCloud na nzere.
Ozugbo Time Capsule na jikọọ na iCloud, ọ nwere ike inweta dị nnọọ ka ndị ọzọ na kọmputa. Ọ ga-edepụtara na n'aka ekpe na niile ga-eme n'ọdịnihu Finder windows n'okpuru nnwekọrịta udi. Pịa na ya jikọọ na-eso faịlụ dị ka gị mkpa.
Uzo ozo ka azụ My Mac adị n'ihi Windows. N'okpuru ebe a bụ n'elu 5 uzo ozo na iji nke onye ọrụ fim, si kasị mma ọzọ (# 1) na-kasị njọ ọzọ (# 5). The omume na-gosiri dabeere na otú mfe na ha bụ iji na otú ha na-arụ ọrụ tụnyere azụ m Mac.
# 1 ọnọdụ. LogMeIn Pro Onye (ruo 2 Computers) $ 99 / Year
Ngwa na mfe ohere n'ime obodo kọmputa
Easy na ala nyefe nke nnukwu faịlụ
Share faịlụ na-enweghị email Mgbakwụnye
Ndenye njikọ n'ime obodo kọmputa na-enweghị ihe nchọgharị weebụ
Bipute akwụkwọ emi odude ke n'ime obodo kọmputa
Ekiri HD videos na gụgharia audio
Platform adị gam akporo na iOS
Download ebe a >>
Ike Ọrụ (ruo 5 kọmputa) Ike Ọrụ (ruo 5 kọmputa) $ 249 / Year
Obere ulo oru (ruo 10 kọmputa) $ 449 / Year
# 2. TeamViewer Oji onwe Free
All-na-otu n'ime obodo akara ngwọta
Fast video na ọdịyo transfer
Ahịa modul n'otu n'otu e
12 ọnwa mkpa nkwado
Kasị elu nche ụkpụrụ
Free usu echichi
Adịchaghị $ 1499
Corporate (3 imekotaotuugbo Oge) $ 2690
# 3. PocketCloud Windows enyi PocketCloud Desktọpụ Free
3 Ọnwa ole na
ọnwa 12 Free (30 Days)
$ 7.99 (3 ọnwa)
$ 23.99 (12 ọnwa)
Cross-ikpo okwu ime akara
Secure VNC Nyocha
Single ịrịba ama Nyocha
Easy na ala faịlụ transfer
Dedicated nkwado ọwa
256-bit AES izo ya ezo
VNC onyenlereanya Plus $ 99
# 5. Splashtop Streamer Personal $1.99 / ọnwa
Cross-ikpo okwu dakọtara
Dedicated oru nkwado
Configurable multi-ọrụ kọmputa ohere
Oditi ụzọ ụkwụ na-akwado nnabata
Virtual desktọọpụ ohere
On premise nkenye ọnọdụ
Na-akwado chromebook na chrome nchọgharị
2-lekọtara nyocha (RSA)
Business $ 60 kwa onye ọrụ kwa afọ
Enterprise $ 100 kwa onye ọrụ kwa afọ
Klas $ 100 / A / afọ
Ọtụtụ uzo ozo ka azụ My Mac adị n'ihi iOS. N'okpuru ebe a bụ n'elu 5 uzo ozo na iji nke onye ọrụ fim, si kasị mma ọzọ (# 1) na-kasị njọ ọzọ (# 5). The omume na-gosiri dabeere na otú mfe na ha bụ iji na otú ha na-arụ ọrụ tụnyere Back m Mac ngwa;
# 1. LogMeIn maka iOS
# 4. VNC onyenlereanya maka iOS
# 1 ọnọdụ. LogMeIn Pro LogMeIn Free
Easy na ala akara nke PC ma ọ bụ Mac kpọmkwem site iPad / iPhone
Zọpụta faịlụ na na iPad / iPhone na-arụ ọrụ na-anọghị n'ịntanetị
Access faịlụ, music na foto iCloud
Itinye faịlụ, foto na vidiyo na ozi ịntanetị
Access na nyefee photos n'etiti foto ngwa na iPad / iPhone na LogMeIn ngwa
Ígwé ojii Bank mwekota njikọ LogMeIn ngwa
LogMeIn mgbanye $ 129
# 2. TeamViewer App TeamViewer ngwaọrụ mkpanaaka nkwado Free
Ime akara mobile ngwaọrụ
Ikori na chitụ dị
Sere usoro log faịlụ
Inupụ ederede ka mobile ngwaọrụ clipboard
Lee ndepụta niile arụnyere ngwa
Pụtịa Wi-Fi ntọala
# 3. PocketCloud App PocketCloud Pro ngwa Free
Atọ Easy njikọ nhọrọ
Kensinammuo ọrụ interface
Touch pointer: elu ziri ezi na ihuenyo akara
Omenala keyboard na ọrụ na-adịghị ịkpụ igodo
International keyboard nkwado
Key-osisi auto- Mee ọ rụọ ọrụ
Multiline ederede ntinye na oyiri / mado ikike
Copy / Tapawa n'etiti iOS na Windows
# 4. RealVNC ngwa VNC onyenlereanya maka iOS Free
Easy òké emulation
Mfe ederede ntinye
High ihuenyo mkpebi
Lee ma dezie faịlụ remotely
Full video na ọdịyo ngosi
Apple Retina ngosi nkwado
Mfe log-na na jikọọ
3D egwuregwu play mode
100% ndakọrịta ohere kọmputa faịlụ na mmemme
Jiri zuru desktọọpụ nchọgharị (ntụgharị, Chrome, Firefox)
A Full Guide nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka Mac
Atụmatụ na iji Nyefee iPhone Music ka Mac
Mmekọrịta ihe niile si iPhone ka Mac
3 Ụzọ mbubata kọntaktị site na iPhone ka Mac
Nyefee Photos si iPhone ka Mac
Top 5 Software ọcha Up Mac
Top 3 Android Emulators maka Mac
3 Ụzọ Ka idetuo Video si iPhone ka Mac
Full Okwu Mmalite banyere CleanMyMac
Ihe niile banyere ebe nchekwa Clean on Mac
Ọcha keyboard, ihuenyo na Ọzọ na Mac
Top 6 iPhone Explorer maka Mac & Win PC
> Resource> Mac> Melite Back to My Mac na Back to My Mac Alternatives